Shuttering Magnet Vagadziri & Vatengesi - China Shuttering Magnet Factory
350KG, 900KG Chingwa Magineti yePrecast Simbi Rails kana Plywood Kudzima
Chingwa Magineti imwe yemhando yekuvhara magineti ine chimiro chechingwa. Iyo inoshandiswa kukodzera simbi njanji muforoma kana plywood shuttering. Iyo yekuwedzera adapta yepasirese adapta inogona kutsigira chingwa chingwa magineti kuti ubatanidze parutivi muforoma zvakasimba. Zviri nyore kubvisa magetsi mukumira nechinhu chakakosha kuburitsa chishandiso.
1T Type Type Simbi Simbi Shuttering Magnet ine 2 Notches
1T mhando isimbi simbi goko shuttering magineti yakajairika saizi yechiedza sandwich pc zvigadzirwa kugadzirwa. Iyo inokodzera 60-120mm ukobvu parutivi muforoma kukwirira. Iyo yekunze 201 isina simbi imba uye bhatani inogona kuramba iyo ngura kubva kukongiri.
0.9m Kureba Magnetic Rutivi Njanji ine 2pcs Yakabatanidzwa 1800KG Magnetic System
Iyi 0.9m kureba magnetic side njanji system, ine simbi formwork mbiri ine 2pcs yakasanganiswa 1800KG inomanikidza magnetic tension mashandiro, ayo anogona kushandiswa mune akasiyana mafomu ekuvaka. Iyo yepakati yakagadzirirwa gomba inonyanya kune iro robhoti inobata kugadzirwa kweakateerana maviri madziro.
Magnetic Shuttering Mbiri Sisitimu musanganiswa unoshanda wemagineti ekuvhara uye simbi muforoma. Kazhinji inogona kushandiswa nekubata robhoti kana kushanda kwemaoko.
1800KG Shuttering Magnets neOne / Off Bhatani yeakagadzirirwa Preform Fomu Rekuvaka System
1800KG Shuttering Magnet ndeye chaiyo bhokisi magineti yekugadzirisa precast muforoma mukugadzirwa kwekongiri. Nekuda kwesimba risinganetsi repasi neodymium magineti, inogona kubata chakuumba patafura zvakasimba. Inoshandiswa zvakanyanya musimbi formwork kana plywood muforoma.
450Kg mhando bhokisi magineti idiki saizi yemagineti system yekugadzirisa sidemold patafura yekongiri. Yaishandisa kuburitsa yakajeka precast kongiri pani se30mm kusvika 50mm ukobvu.